22Bet दर्ता - नयाँ 22BET खाता कसरी बनाउने?
किन 22bet मा दर्ता गर्नुहोस्?
22BET सामाजिक नेटवर्क संग दर्ता
22BET E-mail द्वारा दर्ता गर्नुहोस्
22Bet फोन मार्फत दर्ता गर्नुहोस्
22BET साइन अप गर्नुहोस्
लागि गाइड 2022
22Bet मा दर्ता गर्न द्रुत चरणहरू
दर्ता गर्नु, तपाईंले दर्ता बटनमा क्लिक गर्न आवश्यक छ, जसलाई माथिको उज्यालो हरियो रंगले हाइलाइट गरेको छ, दाहिने कुनामा नजिक.
अर्को तरिका एउटै लेबलको साथ बटनबाट हो – दर्ता गर्नुहोस्, पृष्ठको दायाँ छेउमा बेटिंग स्लिपको तल.
एकचोटि तपाईंले दर्ता पृष्ठ खोल्नुभयो, तपाईंले दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न सक्षम हुन सबै आवश्यक फिल्डहरू भर्नुपर्छ.
तपाईंले सामाजिक सञ्जाल वा सन्देशवाहकहरू मार्फत पूर्ण दर्ता र दर्ता बीच छनौट गर्न सक्नुहुन्छ.
कुनै पनि प्रकारको दर्ताको साथ, तपाईंले 22Bet सँग खाता पूरा गर्न र सिर्जना गर्नको लागि अन्तमा प्रयोगका सर्तहरूमा सहमत हुनुपर्छ.
किन 22Bet सँग दर्ता गर्नुहोस्?
बुकमेकरको वेबसाइटमा दर्ताले पर्याप्त फाइदाहरू ल्याउँछ, जसलाई हामी तल हाइलाइट गर्नेछौं. खण्डहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी दर्ता नगरिएका प्रयोगकर्ताहरूले हेर्न सक्दैनन्.
दर्ता भएपछि र पहिलो जम्मा गरेपछि, प्रत्येक नयाँ ग्राहकले बोनस प्राप्त गर्दछ 100% जम्मा रकम मा. तपाईं खेलकुद खण्डको लागि बोनस बीच छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, र क्यासिनो खण्डको लागि बोनस.
साइटमा लाइभ च्याट छ, जसको माध्यमबाट तपाईंले कुनै पनि समयमा ड्युटीमा रहेका सहायक कर्मचारीहरूलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ.
साइटले संस्करणहरूलाई समर्थन गर्दछ 60 भाषाहरु
22Bet क्यासिनोमा धेरै बिभिन्न विकासकर्ताहरूबाट खेलहरूको संग्रह छ, र सूची लगातार थपिएको छ. यसले खेलाडीहरूलाई विविधता सुनिश्चित गर्दछ.
साइटले सुविधाजनक मोबाइल संस्करण प्रदान गर्दछ, साथै दुई मोबाइल एपहरू – iOS र एन्ड्रोइडका लागि.
22Bet दर्ता – एक विस्तृत गाइड
दर्ता बटन क्लिक गरेपछि, पूर्ण दर्ता विकल्प खुल्छ. माथिको दायाँको लिङ्कबाट तपाईले सामाजिक सञ्जाल वा मेसेन्जर मार्फत दर्ता गर्न रोज्न सक्नुहुन्छ, र शीर्ष बायाँको लिङ्कबाट तपाईं पूर्ण दर्ता विकल्पमा फर्कन सक्नुहुन्छ.
सामाजिक सञ्जाल वा मेसेन्जर मार्फत खाता सिर्जना गर्नुहोस्
छोटो दर्ता विकल्प सामाजिक नेटवर्क वा मेसेन्जर मार्फत हो. तर यी नेटवर्कहरू चिनिन्छन् र मुख्य रूपमा रूसमा प्रयोग गरिन्छ. यी मध्ये, गुगल प्लस नेटवर्क रूस बाहिर पनि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ.
यहाँ तपाईंले मात्र मुद्रा चयन गर्न आवश्यक छ, देश र सामाजिक सञ्जाल, र त्यसपछि दर्ता पूरा गर्न बुकमेकरका नियम र सर्तहरूमा सहमत हुनुहोस्.
तर दर्ताको यो तरिका मन पराउनेहरूले ध्यानमा राख्नु पर्छ कि उनीहरूले पछि आफ्नो व्यक्तिगत विवरणहरू पनि भर्नुपर्नेछ।, जस्तै ग्राहकहरु पूर्ण विकल्प मार्फत जाँदैछन्.
22BET सामाजिक सञ्जालको साथ दर्ता
पूर्ण दर्ता संग 22Bet खाता सिर्जना गर्दै – चरणबद्ध रूपमा
दर्ता बटनमा क्लिक गरेपछि खुल्ने पूर्ण दर्ता विन्डोमा, तपाईंले निम्नानुसार आफ्नो व्यक्तिगत डाटा भर्नु पर्छ:
पहिले तपाईले 22Bet मा प्रयोग गर्नुहुने इमेल ठेगाना भर्नुहोस्.
दोस्रो, आफ्नो नाम भर्नुहोस्.
तेस्रो, आफ्नो अन्तिम नाम भर्नुहोस्.
चौथो, तपाईंले साइटमा प्रयोग गर्नुहुनेछ पासवर्ड भर्नुहोस्.
पाँचौं, तपाईंले साइट प्रयोग गरिरहनुभएको देश चयन गर्नुहोस्. प्रणालीले पत्ता लगाउँछ कि तपाईं कुन देशबाट हुनुहुन्छ. अर्को देश चयन गर्न ड्रप-डाउन मेनु प्रयोग गरिन्छ.
छैटौं, तपाईंले प्रयोग गर्नुहुनेछ मुद्रा चयन गर्नुहोस्. प्रणालीले तपाइँको स्थानबाट स्वचालित रूपमा चयन गर्दछ, तर तपाईं ड्रप-डाउन मेनुबाट अर्को मुद्रा चयन गर्न सक्नुहुन्छ.
सातौं, तपाईंले बुकमेकरका नियम र सर्तहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ भनी घोषणा गर्नु अघि तपाईंले बक्समा टिक लगाउनु पर्छ.
आठौं, तपाईले गर्नुपर्ने भनेको दर्ता समाप्त गर्नको लागि हरियो दर्ता बटनमा क्लिक गर्नु हो.
22BET दर्ता इ-मेल द्वारा
22Bet दर्ताको लागि महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण र नियमहरू
– यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले हालको इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुभयो किनभने यो तपाईंलाई सम्पर्क गर्न समर्थन टोलीको लागि प्रयोग गरिनेछ. यदि तपाईंको इमेल अप टु डेट छैन भने, तपाईंले आफ्नो दर्ता पुष्टि गर्न वा सूचनाहरू प्राप्त गर्न लिङ्क प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुने छैन, जस्तै वर्तमान वा आगामी बोनस र अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी.
– एकचोटि तपाईंले पूर्ण दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुभयो, एउटा विन्डो खुल्नेछ जहाँ तपाईंले 9-अङ्कको कोड देख्नुहुनेछ. यो साइट को लागी तपाइँको प्रयोगकर्ता नाम हो. तपाइँ तपाइँको पासवर्ड प्रविष्ट गर्न को लागी एक बक्स पनि देख्नुहुनेछ.
– भित्र 72 घण्टा, तपाईंले इमेल मार्फत प्राप्त गर्ने लिङ्क मार्फत आफ्नो दर्ता पुष्टि गर्नुपर्छ.
– तपाईं कोड लेख्न सक्नुहुन्छ, जुन साइटको लागि तपाइँको प्रयोगकर्ता नाम हो, तर तपाईं आफ्नो इमेल ठेगानाको साथ आफ्नो खातामा लग इन गर्न सक्नुहुन्छ.
– दर्ता पछि, तपाईंले कुन स्वागत बोनस प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ निर्दिष्ट गर्न आवश्यक छ – खेलकुद खण्ड वा क्यासिनो खण्डको लागि, वा घोषणा गर्नुहोस् कि तपाइँ कुनै पनि बोनस प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न.
साइट दर्ता र प्रयोग गर्दा सुरक्षा
व्यक्तिगत डाटा प्रविष्ट गर्दै, प्रमाणिकरण कागजातको प्रतिलिपि पठाउने र 22Bet मा भुक्तानी विधिहरू प्रयोग गर्ने पूर्ण रूपमा सुरक्षित छन्. बुकमेकर कुराकाओ जुवा प्राधिकरण द्वारा इजाजतपत्र प्राप्त छ. लाइसेन्स नम्बर 8048/JAZ हो. नोभेम्बरमा जारी गरिएको थियो 16, 2018 र नोभेम्बर सम्म मान्य छ 28, 2023.
22Bet मोबाइल फोन मार्फत दर्ता
जब तपाइँ साइटको मोबाइल संस्करण वा एपहरू मार्फत दर्ता गर्नुहुन्छ, प्रक्रिया एउटै छ, दुई दर्ता प्रकार मध्ये एक को छनोट संग.
– पूर्ण संस्करणलाई भित्र लिङ्क मार्फत दर्ताको पुष्टिकरण पनि आवश्यक छ 72 घण्टा.
– मोबाइल उपकरण मार्फत दर्ता गर्दा, तपाईं अंग्रेजी संस्करण प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुने छैन. दर्ता फारम अंग्रेजीमा लोड गरिएको छ.
22BET मोबाइल फोनको साथ दर्ता
22BET खाता प्रमाणीकरण
प्रमाणीकरण भनेको ग्राहकहरूको पहिचान प्रमाणित गर्न सबै अनलाइन बुकमेकरहरूले लागू गर्ने प्रक्रिया हो. तपाईंले दर्ता गरेपछि केही समय, तपाईंलाई आफ्नो व्यक्तिगत विवरणहरू आईडी कागजात मार्फत प्रमाणित गर्न सोधिनेछ. यहाँ प्रक्रिया कसरी काम गर्दछ.
म 22Bet मा कसरी प्रमाणित गर्छु?
एकचोटि तपाईंले सफल दर्ता मार्फत खाता सिर्जना गर्नुभयो, तपाईंले यसमा निश्चित व्यक्तिगत विवरणहरू भर्नुपर्छ. यी समावेश छन्:
– तपाईंको जन्म मिति;
– बुकमेकर द्वारा स्वीकृत तपाईंको पहिचान कागजातको श्रृंखला (आईडी कार्ड वा राहदानी);
– आफ्नो आईडी नम्बर;
– तपाई कुन जिल्ला र इलाकामा बस्नुहुन्छ.
कागजात द्वारा प्रमाणिकरण बुकमेकरबाट कल पछि गरिन्छ. यो वेबसाइटमा खातामा पठाइन्छ. दर्तामा प्रविष्ट गरिएको व्यक्तिगत विवरणहरू पुष्टि गर्न तपाईंले आफ्नो आईडी कागजातहरूको स्क्यान गरिएको प्रतिलिपि वा फोटोहरू पठाउनु पर्छ।. प्रतिलिपि वा फोटोहरू इमेल मार्फत पठाइन्छ.
जब तपाइँ तपाइँको 22Bet खाता प्रमाणित गर्न प्रेरित गरिन्छ, तपाईंले निम्न कार्यहरू गर्नुपर्छ:
– प्रतिलिपि पठाउनुहोस् (स्क्यान वा फोटो) बुकमेकरको टोलीलाई आईडी कागजातको
आईडी कार्ड जस्ता कागजातहरूको लागि तपाईंले कागजातको दुबै छेउको प्रतिलिपि बनाउनु पर्छ.
– 22Bet लाई सामान्यतया फिर्ताको अनुरोध प्रदान गर्नु अघि यो प्रक्रिया चाहिन्छ.
बैंक स्थानान्तरणको लागि प्रमाणीकरण
जब बैंक स्थानान्तरण द्वारा लेनदेन गर्नु पर्छ, बुकमेकरसँग निम्न अतिरिक्त आवश्यकताहरू छन्:
– यदि तपाइँ क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईंले कार्डको दुबै छेउको प्रतिलिपि बनाउनु पर्छ. उल्टो पक्षमा तपाईंको हस्ताक्षर हुनुपर्छ.
– तपाईंले आफ्नो हुलाक ठेगाना देखाउने आधिकारिक कागजातको प्रतिलिपि पठाउनु पर्छ यदि ठेगाना तपाईंको आईडीमा रहेको तपाईंको स्थायी ठेगाना भन्दा फरक छ भने.
– बुकमेकरले आफ्नो विवेकमा अन्य कागजातहरू आवश्यक हुन सक्छ.
ई-वालेट निकासीको लागि प्रमाणीकरण
यस प्रकारको निकासीको लागि, 22लेनदेन रकम एक निश्चित सीमा नाघ्यो भने थप कागजात आवश्यक हुन सक्छ
22Bet वेबसाइटमा दर्ता गर्न सजिलो छ. कसरी दर्ता गर्ने छनौट गरेपछि सबै विवरणहरू भर्नुहोस्. पूर्ण दर्ता राम्रो छ, सर्टकट बाटोको रूपमा, सामाजिक सञ्जाल वा मेसेन्जर मार्फत, केही पछि यी विवरणहरू प्रविष्ट गर्नबाट तपाईंलाई बचाउने छैन.
यो बोनस छनौट गर्न महत्त्वपूर्ण छ, या त खेलकुद खण्ड वा क्यासिनोको लागि, दर्ता गरेपछि प्रोत्साहन रकमको फाइदा लिन सक्षम हुन. बोनस रकमको प्रयोगसँग सम्बन्धित नियमहरू पूरा गर्नुहोस्, र थप बोनसहरू तपाईंलाई पर्खिरहेका छन्, विभिन्न खेलकुद घटनाहरू र क्यासिनो खेलहरूको साथ, बुकमेकरको पहिले नै दर्ता भएका ग्राहकहरूको रूपमा.
हाम्रो साइट विभिन्न भाषाहरूमा